भ्रमण वर्षमा सौराहा झिलिमिली ! « Drishti News
भ्रमण वर्षमा सौराहा झिलिमिली !
चितवन, २० मंसिर । घोषित रुपमा विद्युतभार कटौती नभए पनि प्राविधिक कारण समय समयमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुने गरेको छ । लामो क्षेत्रमा एउटै फिडरबाट तानिएका तार र पुराना ट्रान्सफर्मरमा देखिने समस्याका कारण पटक पटक विद्युत् अवरुद्ध हुँदा अत्यावश्यक क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई लक्षित गर्दै पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा विद्युत अवरुद्ध नहुने गरी तयारी थालिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टाँडी वितरण केन्द्रले नयाँ फिडर जडान गरी सौराहा क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति गराउन लागेको छ । केन्द्रका प्रमुख चुतुनकुमार श्रीवास्तवका अनुसार पर्सा सबस्टेशनबाट खैरहनी, कुमरोज, बुढ्यौली हुँदै हाल सौराहा विद्युत पु¥याइएको छ । जसले गर्दा सौरहामा भ्रमण वर्षमा झिलिमिली हुनेछ ।
पर्सा सबस्टेशनमा हाल चारवटा फिडर रहेका छन् । यसलाई बढाएर छ वटा पु¥याउने तयारी गरिएको छ । भरतपुरबाट गएको ३३ हजार केभिए विद्युत्ले नपुगेपछि ११ हजार केभिएको छुट्टै तारमार्फत सोही क्षेत्रमा विद्युत पु¥याइएको छ ।
श्रीवास्तवले पुसभित्रमा सौराहामा विद्युत् अवरुद्ध नहुने गरी व्यवस्थापन गरिने बताए । क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाको टोलीले केही दिनअघि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भेट गरी भ्रमण वर्षमा विद्युत् अवरुद्ध नहुने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको थियो । देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य सौराहा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्वार हो । रासस